एक vseirage के हो र यो X-रे भन्दा फरक छ
गर्भवती महिलाले निमोनिया, क्षयरोग, खुट्टा भाँच्न वा अर्को चोट प्राप्त गर्न सक्दछ। उनलाई दन्त हेरचाह चाहिन सक्छ।
गर्भावस्थाको समयमा खतरनाक एक्स-रे विकिरण के हो?
X-R रे विकियन गर्भावस्थाको पहिलो त्रैमासिकमा खतरनाक छ, जब सबै अंगहरू र प्रणालीहरू भ्रुणको सुरूवात गर्छन्। दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिकमा यी जोखिमहरू कम छन्।
<< p> प्रारम्भिक गर्भावस्थामा एक्स-रे अध्ययनहरूको साथ प्रारम्भिक एक्स-रे अध्ययन, निम्न जटिलताहरू सम्भावित छन्:
पछिका लागि धेरै एक्स-रे अध्ययनले बच्चाको बौद्धिक विकासको उल्लंघन गर्न सक्छ।
महत्त्वपूर्ण: न त खुक्लोक गुहा / लिम्ब / ब aw ्गाराको एक्स-रे वा एकल एन्टि-गुहा एक्स-रेले त्यस्ता परिणामहरू निम्त्याउँछ।
X-रेमा गर्भवती पठाउन कोटिकात्मक के हो?
गर्भावस्थाको कुनै छेमानेसँग डिशको रोगहरू भ्रुण वा बच्चा जन्माउने कामका लागि खतरनाक छन्, संक्रमणको frui, ले बच्चाको रोग र शैलीहरू निम्त्याउन सक्छ। उच्च-गुणवत्ता उपचार वा शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप आवश्यक निदान, र एक्स-रे सबैभन्दा जानकारीमूलक हो।
हाल, वैज्ञानिकहरूको बच्चाको लागि बिल्कुल सुरक्षित छ कि छैन भन्नेमा कुनै निश्चित धारणा छैन। तर जब आधुनिक डिजिटल vysiranges र विशेष सुरक्षा उपायहरू प्रयोग गर्दा साथै सबै contraintications (विशेष रूपमा, यो एक प्रारम्भिक शब्द हो - गर्भावस्थाको जोखिम शून्यमा जान्छ।
दन्त चिकित्सकका डाक्टरसँग हाम्रो क्लिनिकको डाक्टरसँग सल्लाह लिनुहोस् यदि तपाईंले गर्भावस्थाको समयमा दाँत एक्स-रे बनाउनु पर्छ भने, विशेष गरी सुरुको समयमा। हामी आधुनिक डिजिटल एक्स-रे उपकरणको साथ सुसज्जित छौं जुन तपाईंलाई अराजकरण कम गर्न अनुमति दिईन्छ, बच्चालाई हानी पुर्याउँछ र ठोस र नरम ब aws ्ग टिश्यूहरूको राज्यको स्पष्ट तस्वीर दिनुहोस्।
पूर्ण परीक्षाको लागि तयारीले केहि मिनेट समय लिन्छ, जबकि दाँतको गोलीबारी सेकेन्डको अंश भित्र बनाइएको छ। सामान्यतया, एक्स-रेले निम्न चरणहरू समावेश गर्दछ:
सेन्ट पीटर्सबर्गमा क्लिनिक "मेडिकल" मा, तपाईं विन्यासनको न्यूनतम खुराकको साथ गर्भावस्थाको साथ वा दाँतको एलौंडीको एक्स-रे दायरा गर्न सक्नुहुन्छ प्रक्रिया metits टमरहरू मानिन्छ।
एक्स-रेले तपाईंलाई जोगाएको जीवा दन्तको समस्याहरूको सही निर्धारण गर्न र तिनीहरूलाई हटाउनको लागि कदम चाल्न अनुमति दिन्छ। धेरै जसो केसहरूमा एक्स-रे बिना, निदान र दायित्व लेख्न असम्भव छ। सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने जोखिमलाई कम गर्न अनुमति दिँदै, त्यसकारण गर्भवती वा नर्सि arly महिलालाई तनावबाट बचाउन, जसको नकारात्मक असरहरू अवैध तुलनामा प्रायः देखा पर्दछ। रेडियोग्राफी स्तनपान अवधिमा आमाहरू बनाउन सक्छन्।
<< p> असुविधा निश्चित गर्नु हो, अराजकता को न्यूनतम खुराक। यो भन्नु पर्दछ कि हामी एक्स-रे माइक्रोडोसोको बारेमा कुरा गर्दैछौं। उदाहरण को लागी, दाँत जाँच गर्दा गर्भवती महिलाको शरीरमा विकिरण भारमा विकिरण लोड गर्मीको दिनमा सौर्य विकिरणसँग तुलना गर्न सकिन्छ।
<< p> परीक्षाको परीक्षा हुनु अघि, डाक्टरले आफ्नी आमा र बच्चाको परिणाम बारे जति देख्छन्, यो बिना एक्स-रेले कति गर्भवतीको लागि आवश्यक छ कि छैन। तर त्यहाँ केस छन् जहाँ आवश्यक उपायहरू सही निदान बिना लिन सकिदैन:
गर्भवती महिलाका लागि एक्स-रे भन्दा एक्स-रे भन्दा हानिकारक छ। गर्भावस्थाको बखत X-रे: विधिको खतरा र भ्रुणको लागि सम्भावित परिणामहरू
X-R गर्भावस्थाको समयमा सिफारिश गरिएको छैन, तर निषेधित छैन। उदाहरणका लागि, एक महिलाको स्वास्थ्यको लागि गम्भीर खतरामा यो पूर्ण रूपमा नियुक्त गरिएको छ, उदाहरणका लागि, फोक्सोको सूजनका लागि, फ्ल्याटरको भड्काउनको लागि। यस्तो अध्ययनले भ्रुणमा एक पुग्ने रोगी विकास विकास हुन सक्छ, त्यसैले सम्भव भए, यदि सम्भव छ रेडियोलोजिकल निदान विधिहरू तिनीहरूलाई सुरक्षित विकल्पहरूको साथ प्रतिस्थापित गरेर निर्धारित गरिएको छैन।
थप रूपमा, एक्स-रे गर्भावस्थाको योजना बनाउँदा एक्स-रे प्रयोग गरिएको छैन, असफल गर्भधारणमा विश्वासको अभावमा। आक्रामक विकिरणले सेलुलमा परिवर्तन ल्याउँछ, यो भ्रुणको विभिन्न रोगबिलोइजहरूको कारण हुन्छ। तसर्थ, कुनै महिलाले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु पर्छ कुनै पनि समय मा यस्तो निदान को आवश्यकता हटाउन को लागी।
एक्स-रे गर्भावस्थाको समयमा असाधारण केसहरूमा तोकिन्छ जब अन्य विधिहरूले देखाउँदैनन्। समान निदानहरू एक महिलाको जीवनमा खतराको उपस्थितिमा आवश्यक छ। प्राय:, स्न्यापशटले गवाही अनुसार निम्न केसहरूमा बनेको छ:
X-रे पेल्विस र घाँसहरू जस्तै फोक्सोको साथ - परिधीय अध्ययनबाट बढी। यदि त्यहाँ एक अवसर छ भने, डाक्टरले राई रुग्राफी बदल्छन्, उदाहरणका लागि, एमआरआई वा अल्ट्रासाउन्डलाई निदान गर्न अन्य तरिकाहरू।
X-रे र गर्भावस्था योजना
गर्भावस्था एक्स रे-रे छोड्न सकिन्छ, तर महिला यससँग सम्बन्धित सबै जोखिमहरू बुझ्नुपर्दछ। तर यो खराबको बारेमा सोच्नु आवश्यक छैन, आधुनिक डिजिटल डिजिटल एक्स-रे उपकरणले अघिल्लो प्रयोग गरिएको फिल्म भन्दा ठूलो सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दछ। थप रूपमा, डाक्टरले भ्रुणलाई बचाउन सबै उपायहरू लिन्छिन्, रेडिफायरको अनुमानित डोजलाई सुरक्षित गर्न वा सुरक्षित गणना गर्न।
पातलो र घुमाइएको दन्त च्यानलहरूको छाप।
जटिल अपरेशन दाँत हटाउन;
निहुरा, रुट फ्र्याक्शन, रुट फ्र्याक्चर, नजिकबाट-चोरी कपडाहरूको सूजन;
दाँत हटाउने वा मर्मत गर्ने समस्या समाधान गर्दै;
संदिग्ध समय अवधिमा;
बुद्धि दाँतको समस्याको वृद्धि। <
एक अनुभवी विशेषज्ञले पनि सबै समस्याहरू प्रकट गर्दैन, त्यसैले गर्भावस्था एक्स-रे आवश्यक छ - अध्ययनलाई कडा चेतावनी दिइन्छ। प्रक्रियाहरू विशेष गरी निम्नलिखित अवस्थाहरूमा महत्त्वपूर्ण छ:
गर्भावस्थाको क्रममा दाँत स्न्यापशटले हड्डी ऊतक, गमहरू र एक सही निमनको अवस्थाको आकलन गर्न सम्भव बनाउँदछ।
डेन्टेन एक्स-रे गर्भावस्था
भविष्यका आमाहरू गर्भावस्थाको समयमा दाँत एक्स-रे गर्न डराउँछन्, जुन बच्चालाई हानि पुर्याउँदैन। तर यस अध्ययनको नियुक्तिले सुझाव दियो कि दन्त रोग एक सम्भावित खतरा हो र एक महिलाको लागि र भ्रुणको लागि। नहरहरू वा नजिकै-कर्ने ऊतीहरूमा सूजन बिना पर्याप्त उपचार बिना, संक्रमण जबडा हड्डीमा फैलिन र शरीरको कुनै पनि भागमा प्रवेश गर्न सकिन्छ।
<< p> अत्यन्तै खतरनाक सेप्सिस, गर्भावस्थाको फोहोरता, मातृभाषामा अवरोध, माकीय, फोक्सो, मस्तिष्कको आन्तरिक अंगलाई नोक्सान गर्नुहोस्। सब भन्दा डरलाग्दो जटिलताहरू आवेग, चेतना, एक कोमा र मृत्युको क्षतिको साथ श्याक छन्। तसर्थ, गर्भावस्थामा दाँतको एक्स-रे त्याग्न अव्यावहारिक छ।
लेटिनका लागि पहिले नै पहिलो तीन महिनालाई यस प्रकारको निदानको लागि अमूर्त ठानिन्छ, किनकि फलहरू अझै गठन भएको छैन। दोस्रो त्रैमालिकलाई फलस्वरूप दिइयो, फल गठन भइसकेको छ र अराजकता भएको असीमितको न्यूनतम डोजले उनलाई चोट पुर्याउनेछैन, त्यसैले तपाईं डरको गर्भावस्थामा दाँतको चित्रहरू गर्न सक्नुहुन्छ।
थप, मौखिक गुफाको निदान उदाहरणका लागि छाती वा श्वेभिक क्षेत्रको अध्ययन भन्दा बढी हानिकारक छ। आखिन्तै, दन्तचिवलीमा, भविष्यमा आमाको पेट भर पर्दछटाइक एफ्रोन द्वारा भरपर्दो छ र सर्वेक्षण आफैंलाई कम विकिरण लोडका साथ आधुनिक उपकरणहरू गरिन्छ।
<< p> तर कुनै पनि केसमा यदि हामीले गर्भावस्थाको क्रममा दाँतको लागि कुरा गर्दै थियौं भने एउटी महिलाले डाक्टरलाई आफ्नो स्थिति र गर्भावस्थाको सटीक अवधिको बारेमा चेतावनी दिनुपर्दछ।
क्लिनिकमा गर्भावस्थामा गर्भावस्थामा गर्भावस्थामा दाँतको स्न्यापशट "vudient"
हल्लाउनुहोस्, नमस्कार! मेरो नाम दशहा हो। मसँग गर्भावस्थाको th औं हप्ता छ (ओभलेशन मिति अनुसार) र आज मैले दोस्रो अल्ट्रासाउन्डमा) भ्रमण गरें (मोल स्टिकमा दर्ता गरेकी थिएँ सबै: तिनीहरूले विशाल डरलाग्दो रूपमा डराए, म बसेर बस्न सक्छु र आँसु बस्छु। हुनसक्छ उसलाई त्यस्तो परिस्थिति थियो?
अन्तिम अवधि 20 मे 20 थियो। जून 1 15 मा, मेरो ब aw ्गालाई दुर्व्यवहार र दन्त चिकित्सकले मलाई एक्स-रे बनाउन बाध्य तुल्यायो। मलाई गर्भावस्थाको बारेमा थाहा थिएन (परीक्षणहरू केवल228 डीसी,225 डीसी र 1 डीज - 1 , 1 du र 20 औंमा कुनै संकेतहरू थिएनन्, त्यसैले शान्तपूर्वक निदानमा जान थाल्दैन। एक सुरक्षाक एप्रैन पोशाक लगाइएको थियो, दुई अनुमानहरुमा शट सफलतापूर्वक सकियो, डाक्टरले उपचार र निर्धारित र शास्त्रीय प्रक्रियाहरू र शल्यक्रिया प्रक्रियाहरू)। मसँग मेरो लामो दाँतको दाँतको उपचार गर्न समय थिएन, जस्तो कि परिक्रिकाक शुरू भयो र छाती चिन्तापूर्वक बिरामी थियो। मैले परीक्षण गरे: तिनीहरू, यो मामला को बारेमा स्पष्ट छ, सकारात्मक हुन को लागी।